January | 2021 | HimiloNetwork
Sheekada Ninkii 72 masas ah qol kula jiray 72 saacadood.
Himilo January 18, 2021	Leave a comment 215 Views
MUQDISHO (HN) — Neelam Kumar Khaire, oo ah aqoonyahan ku gaaroobay baxaalliga iyo dhaqanka masaska iyo xamaalatada, wuxuu heystaa rikoor aan jebin. Isaga oo da’yar ayuu 72 saacadood oo xiriir ah wuxuu xero kula jiray 72 masas ah. Wuxuu caddeeyey in masasku aanay qaniinyada la dhalan balse ay tahay wax laga keensado haddii la maago. Sannadkii 1980-kii, isaga oo 28 ...
Himilo January 17, 2021	Leave a comment 131 Views
MUQDISHO (HN) — Dhalinyarada Muslimiinta Lancashire ee Blackburn, iyo carruurta masaaajidda magaalada ayaa u midoobaya inay u kacaan ol’olaha nadaafadda iyo bilicda. “Waxaa jiray tallaabooyin lagu ilaalinayo bilicda iyo nadaafadda, waxaana aynu iska kaashanay guddiga masjidka,” ayuu yiri Omar Zaman. “Dadaalkeenna waxaa qeyb ka noqday carruurta masjidka waxaana sidoo kale aan u sameynay kulamo isboorti.” “Waxaan sdioo kale qeyb ka ...
Himilo January 17, 2021	Leave a comment 238 Views
MUQDISHO (HN) — Iska ilow ciriiriga ka jira waddada Wadnaha iyo Isgoysyada Bakaaraha iyo Howl-wadaag. Taas waa farriinta kaliya oo lagaaga keeni karo Jidka Jaalle Siyaad. Sababta oo ah ciriiri dhaafay ciriiri wuxuu hadda saacad walba ka dhex jiri karaa jidka dheer ee Kulliyadda Jaalle Siyaad iyo Warshadda Caanaha u dhaxeeya. Haddii aad rabtid inaad si dhab ah u fahamto ...
Muslimiinta Japan oo laba-jibbaar kordhay.
Himilo January 11, 2021	Leave a comment 172 Views
MUQDISHO (HN) — Tirada Muslimiinta Japan ayaa korortay laballaab 10-kii sano ee lasoo dhaafay halkaas oo in badan ay qaadanayaan diinta Islaamka. Marka loo eego Tanada Hirofumi of Waseda University, waxaa laba jibbaar noqday tirada Muslimiinta Japan, sida laga soo xigtay The Economist. Sannadkii 2010, tirada Muslimiinta Japan waxay ahaayeen 110,000. Dhammaadka Sannadkii 2019, waxay noqdeen 230,000 halkaas oo 50,000 oo ...
Himilo January 11, 2021	Leave a comment 142 Views
MUQDISHO (HN) — Nin Shiinees iyo waalidkiisa ayaa go’aansaday in ka bixiyaan isbitaalka Beijing oo uu muddo lix sanno ah si joogto ah ugu noolaa kaddib markii muran xagga deynta ah uu dhex maray iyaga iyo maamulka. Sannadkii 2014-ka, ninkan oo lagu magacaabo Tian waxaa luu gudbiyay isbitaalka Beijing kolkii uu dareemay xanuun liidaanyo iyo hungaaco leh. Waxaa la filayay maalmo kooban ...
Himilo January 11, 2021	Leave a comment 317 Views
MUQDISHO (HN) — Wax-barashada heerka sare inta badan waxaa lagu gaaraa nafhurnimo, dadaal iyo ka go’naansho. Kuwa kasoo qalin-jebinaya waxaa loo arkaa halyeeyo naftooda iyo dadkooda usoo hooya guul muuqata. Balse hadda arday walba oo kasoo qalin-jebiya heerka jaamacadda, laguma tilmaami karo halyay mutaclim ah. Taas waa marka aynu fahamno in jaamacad walba aysan qeyb ka ahayn xaqiijinta yoolkaas. Jaamacaduhu ...
Himilo January 7, 2021	Leave a comment 142 Views
MUQDISHO (HN) — Faafitaanka xanuunka COVID-19 wuxuu saameyn ba’an ku yeeshay qoysas badan oo danyar ah oo ku nool Maraykanka. Balse South Jersey, waxaa ka jira dhaqdhaqaaq samafal ah oo ay horboodayaan koox Muslimiin ah kuwaas oo cunnooyin bisil iyo kaalmo kale la gaaraya kuwa baahan. “Waxaynu bixinaa bariis, digir iyo qudaar lagu iidaamay,” Saima Bhutta ayaa u sheegtay KYW News Radio. ...
Maal-geshiga Islaamiga ah iyo Muslimiinta Kanada.
Himilo January 7, 2021	Leave a comment 149 Views
MUQDISHO (HN) — Shaki kuma jirto in maal-geshiga iyo dhaqaalaha Islaamiga uu sannadihii tagay soo jiitay indhaha caalamka, kana mid noqday mid kamid ah kuwa ugu kobaca fiican caalamka. Maanta, adduun lacageed oo lagu qaddaray 2 trillion ayay ku fadhiyaan. Waxaana la filayaa inay gaarto $3.8 trillion marka la gaaro sannadka 2023-ka. Si haddaba loo dhiirri-geliyo kobaca iyo maalgeshiga ku ...
Himilo January 5, 2021	Leave a comment 255 Views
MUQDISHO (HN) — Dhaqtar Muslim ah oo ku nool Maraykanka laguna magacaabo Omar Atiq ayaa go’aansaday inuu deynta ka dhaafo ama ka cafiyo bukaannada la xanuunka Kansarka kuwaas oo in badan oo kamid ah aysan awoodin inay iska bixiyaan lacagta ku qoran. “Waqti badan waxaan usoo joognay danyar aan awoodi karin inay iska bixiyaan lacagta isbitaalka,” ayuu u sheegay Good Morning ...
Himilo January 5, 2021	Leave a comment 141 Views
MUQDISHO (HN) — Koox Muslimiin Latino ah ayaa gudaha Chicago kawada ol’ole isku soo dhawaanshiyo ka dhex abuuri kara bulshada – iyaga oo cunnooyin bisil, hu’ adag oo looga gaashaanto qabowga iyo sidoo kale dacwad Islaami ah siinaya dadka ayaanka liita iyo kuwa u baahan kaalmada. Habeen walba oo Jimce ah samafalayaal ka socda Ojala Foundation waxay bartamaha Chicago – ...
Askari Maraykan ah oo Amerikaan-ka u sharraxaya Diinta Islaamka.